Iengqungquthela kunye neempawu zonyango, zokupheka
Namhlanje, lethu nqaku liya kunikezelwa kwelinye lamaqhawe kwisicwangciso sesibini sefeythi "Cinderella" - ithanga. Iphunga ayiphumeli kuphela kwimpumelelo, kodwa nakubomi bethu boqobo. Kuhlwaya kwaye kuyaphilile. "Iphunga kunye namayeza alo, ama-recipes" ngumxholo wendaba yethu.
Ikhumba isityalo sonyaka sentsapho yamathanga, esasazwa kulo lonke ihlabathi, ngaphandle kweMntla eMpuma. Ikhumba isityalo esithandayo-ukutshisa, ukuthanda ukukhanya nokunyanga, kunye namagqabi amakhulu. Ngaphambi kokutyala ithanga, imbewu kufuneka ifakwe kwiingubo ezinomthunzi iintsuku ezimbalwa. Utyalo ngokuqhelekileyo ngoMeyi ngaphantsi kwefilimu, kwaye inyanga kamva ifilimu yokutsalwa kwefestile ingasuswa. Blooms ukususela ngoJuni ukuya ekwindla. Izithelo zivuthwe ngo-Agasti. Indawo yokuzalwa yempungu yiMelika. Yiloo nto, sinetyala kuColumbus ngenxa yokuba saqala ukukhulisa amathanga. Kwaye eMelika, ithanga likhule iminyaka engama-3 000 edlulileyo, kwaye eRussia yaqala ukukhula iminyaka eyi-150 edlulileyo.
Ziziphi izinto ezincedo kwiimpu? Iziqhamo zentenge ziqukethe i-starch, i-carotene, i-fiber, i-vitamin B, i-B2, i-B6, i-C, i-PP, i-ash, i-salts yensimbi, i-potassium, i-calcium, i-magnesium, i-chlorine, i-fluorine, i-sulfur, i-phosphorus, i-pectic, i-sugar, i-salicylic acid. iprotheni, i-phytin, ioli efunekayo. Iphunga lenziwe ngamanzi angu-92%. Siyabulela kwi-peel eninzi, iivithamini zigcinwa ixesha elide. Ngoko yintoni iipropati zokuphulukisa kwiimpu? Iphunga inezinto ezininzi zokuphilisa. Okokuqala, ithanga liyimveliso yokutya, kuba kuthathwa njengomkhiqizo we-calorie ephantsi, ngoko i-pumpkin isinconywa ukuba idle ukukhuluphala. Ukutya kukucetyiswa ngenxa yesifo seengtso, njengoko kunconywa kubantu abaye bavalelwa yisifo sikaBotkin. Kwimichiza yomntu, iipropikisi zamathambo zisetyenziswe njenge-diuretic. Ukusuka kumathanga ufumana amafutha ahlukahlukeneyo, yenza i-tinctures, syrups, broths. Kwakhona kunciphisa izinga le-cholesterol egazini, lisusa izinto ezinobuthi ezisuka emzimbeni. Ijusi entsha ityalwa ukuba isiphuze xa i-insomnia. Ijusi lomphunga luncedo kwiintlungu zokukhathazeka. Inyama inceda ukukrazula iintlobo ezahlukeneyo ze-eczema, iimpumle kunye ne-acne, kwaye imbewu iyanciphisa iimbungu ezahlukeneyo. Inyama yempuphu inconywa ngenxa yezifo ze-colon, iyanciphisa ukutyunjwa. Ikhungulu iphucula umsebenzi wesisu kunye namathumbu emfesheni ebilisiwe kunye. Ekubeni ithanga linomxholo ophezulu we-iron, luncedo kwi-anemia. Inciphisa intlungu kwi-cystitis enamandla, kwaye kwezinye iindlela ze-urethritis. Ikhumba lekhumba lingasetyenziselwa njengobuso buso, njengokuba kunjalo kwesikhumba samavithamini amaninzi. Inyama kwindlela ebilisiwe ibonelele kwizigulane ezine-TB, i-jaundice. Ukukhulula iintloko kunye ne-meningitis.
Itolo libuyisela umsebenzi wesibindi. I-recipe yile: uthathe i-300 g yembewu ehlanjululweyo, udibanise kwaye udibanise ngamanzi 50 ml, hambisa ngokucophelela, unokongeza ubusi okanye ukupheka 50 g.Phuza kwisisu esingenalutho ngeyure. Emva kweeyure ezimbalwa, uphuze i-laxative kwaye kwesinye isiqingatha seyure ufake i-enema. Kunconywa ukuba amaphuphu amancinci adle ngesonka. Iimbumba eziqulethwe kumathanga zivuselela intlungu kwaye ayicasuli. Iphunga litshisa kuzo zonke izinto ezinobungozi, kwaye ngoko zizisusa emzimbeni. Ngenxa yokungazinzi, kufuneka uphuze i-pumpkin juice encinci indebe kunye nobusi ngaphambi kokulala. Imbewu yepumpkin isetyenziselwa unyango lwe-prostatitis, ngenxa yoko kufuneka udle imbewu yama-pump 60 ukuya kwengu-60. Abanakho iziphumo ezinobungozi emzimbeni womntu, ngoko ke banconywa kubantwana nakwabadala, abafazi abakhulelweyo nabamnesi. Kwakhona umgquba ulungele ukuhlanza kunye ne-toxicosis yabasetyhini abakhulelweyo. Ingadliwa ngaphandle kwemithintelo, njengoko, kwakhona ndiphinda ndiphindaphindile, ukuba ithanga alithwali omnye umonakalo. Ukunqunyulwa kwamathangi kunceda intlungu yesifuba nokukhwehlela, ukusuka emqaleni. Ukusuka kumathanga ungayifumana ioli ngokunyusa okubandayo. I-oyile isetyenziswa kumayeza aseburhulumenteni, nakwi-cosmetology. Ikhumba isetyenziswa ngokubanzi ekuphekeni, kwaye izitya ezenziwe ngamathanga azihlali nje kuphela, kodwa zi luncedo.
Ijusi lompompo inqanda ukuphuhliswa kweesifo somhlaza. Kule nto, kufuneka uphuze ijezi ezi-2 ngosuku, kwaye i-pulp isetyenziswe kwiimvumi. Xa umhlaza ucetyiswa imihla ngemihla ukuba udle ii-4 iintyatyambo kunye ne-pollen ngexesha ngexesha leentyantyambo zomququ. Ukuze ulahlwe amabala e-pigment kufuneka ugaye imbewu ebomvu ngamanzi, udibanise ubisi kunye nobusi, gcoba ubuso bakho ubambe isigqi seyure. Qhubekani ukwenza le mask uze ufike. Ukuze ulahle i-edema, ama-cuttings cuttings angama-20 kufuneka athululwe nge-0.5 ilitha wamanzi, kwaye abilisiwe ngamaminithi ama-5-10 ngokushisa okuphantsi, uze uvumele ukuhlala ihora, kunye nefayile. Phuza isiqingatha indebe kathathu ngosuku ngaphambi kokutya. Okanye kukho iresiphi elula: kukho inyama yeengxube 2 ngamaxesha ngosuku.
Nantsi i-pumpkin kunye neempawu zonyango, zokupheka.
Ukunyangwa kwamaqanda kunye neempawu zabo
Ukuphumla okukhuselekileyo ngamanzi
Ukubuyiselwa kwemikhosi emva kokugula
Ukugijima - inzuzo kunye neengxaki
Amazambane ezitshiweyo kunye nenkukhu
Ukunyamekelwa kwelungu ekhaya
Ukunyangwa kwamazinyo kunye nokunakekelwa kwamazinyo
Ngaba amanzi amaminerali ayingozi kubafazi abakhulelweyo?
AmaSandwich nge saladi yenkukhu
Ukuzivocavoca abo banxiba izithende eziphezulu
Yimangalisa ntoni ukwenza umntu ngokuhlonipha?
Ukupheliswa kwevumba elimnandi